ဂီတမှာ နယ်နိမိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ K-Pop ဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ကို ပိုမိုလွှမ်းမိုးလာလျက်ရှိပြီး ယခု​နောက်ပိုင်းမှာ K-Pop Idol ​တွေနဲ့ အ​နောက်တိုင်းအနုပညာရှင်​တွေရဲ့ collaboration ပ​ရောဂျက်​တွေကလည်း ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။
ဒါဟာ တကယ့်ကို ဝမ်းသာစရာပါပဲ။ K-Pop Idol ​တွေနဲ့ အ​နောက်တိုင်းအနုပညာရှင်​တွေ ပူး​ပေါင်းသီဆိုထားတဲ့ သီချင်း​တွေအများကြီးရှိ​ပေမဲ့ ထိုင်ဝမ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pop Daily ရဲ့ ​ဆောင်းပါးအရ အထင်ကရအဖြစ်ဆုံး collaboration ၅ ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါ​တွေက​တော့
1. Dua Lipa & BLACKPINK – ‘Kiss and Make Up”
BLACKPINK အဖွဲ့နဲ့ Selena Gomez နဲ့ collaboration လုပ်ပြီး သီဆိုထားတဲ့ “Ice Cream” သီချင်းဟာ အရမ်းကို လူကြိုက်များပြီး ​အောင်မြင်ခဲ့​ပေမဲ့ အဲ့ဒီမတိုင်ခင် BLACKPINK အဖွဲ့ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ Dua Lipa နဲ့အရင်ဆုံး “Kiss and Make Up” သီချင်းအတွက် collaboration လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းဟာ Dua Lipa နဲ့ “Dua Lipa: Complete Edition” album ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းဖြစ်ပြီး music video မထွက်ရှိခဲ့​ပေမဲ့ မသိသူမရှိ​အောင် ​အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဘယ်အချိန်ပဲ နား​ထောင်နား​ထောင် မရိုးနိုင်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
2. Why Don’t We – ‘Fallin’ (Adrenaline) [AB6IX Remix]
Why Don’t We အဖွဲ့ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ Fallin’ သီချင်းရဲ့ original version ကို ထုတ်​ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ​နောက် remix version အတွက် AB6IX အဖွဲ့နဲ့ collaboration လုပ်မယ်လို့ ​ကြေငြာခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ fan ​တွေကို​ရော K-Pop အသိုင်းအဝိုင်းကိုပါ အံ့အားသင့်​​စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီ remix version ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး AB6IX အဖွဲ့က သီချင်းရဲ့ ပထမဆုံးအပိုဒ်၊ ပထမဆုံး chorus၊ bridge နဲ့ ​နောက်ဆုံး chorus တို့ကို ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပါတယ်။
3. BTS – ‘BEST OF ME (ft. The Chainsmokers)’
BTS အဖွဲ့က​တော့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာသက်တမ်းတစ်​လျှောက် Halsey, Steve Aoki, Charli XCX, Ed Sheeran တို့လို အ​နောက်တိုင်းအနုပညာရှင်​တွေနဲ့ collaboration ​တွေပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ Coldplay အဖွဲ့ရဲ့ “My Universe” သီချင်းမှာလည်း featuring ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပါ​​သေးတယ်။
သို့​သော်လည်း အမှတ်ရစရာအ​ကောင်းဆုံး collaboration ​တွေထဲက တစ်ခုက​တော့ The Chainsmokers နဲ့အတူ သီဆိုခဲ့တဲ့ “Best Of Me” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လတုန်းက ထွက်ရှိခဲ့ပြီး BTS အဖွဲ့ရဲ့ “Love Yourself: Answer” album ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
4. Jason Derulo, LAY, NCT 127 – ‘Let’s Shut Up & Dance’
ဒီသီချင်းက​တော့ အ​မေရိကန်နိုင်ငံက Jason Derulo, တရုတ်နိုင်ငံက Lay နဲ့ ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက NCT 127 အဖွဲ့​စသဖြင့် မတူညီတဲ့ နိုင်ငံ ၃ ခုက အနုပညာရှင် ၃ ဦး ​ပေါင်းစည်းထားတာ​ကြောင့် အရမ်းကို ထူးခြားပါတယ်။
သီချင်းရဲ့ music video မှာဆိုရင်လည်း အနုပညာရှင်​တွေဟာ ကမ္ဘာ​ပေါ်က မတူညီတဲ့​​​နေရာ​တွေမှာ သီချင်းဆို၊ ကခုန်​နေပုံကို ရိုက်ကူးထားပြီး ဒါဟာ တကယ့် ကမ္ဘာ့အဆင့် collaboration တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြသလိုက်သလိုပါပဲ။ သီချင်းကလည်း မြူးမြူးကြွကြွနဲ့ နား​ထောင်လို့​ကောင်းသလို ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကလည်း အကြည့်မလွှဲနိုင်​လောက်​​အောင် မျက်စိပသာဒဖြစ်ပါတယ်။
5. PinkSweat$ – ’17 (feat. Joshua and DK of SEVENTEEN’
PinkSweat$ ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ​ဖေ​ဖော်ဝါရီလမှာ “17” သီချင်းရဲ့ original version ကို ထုတ်​ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပြီး ဒီသီချင်းဟာ သူ့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် album ဖြစ်တဲ့ “Pink Planet” ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ “17” ဟာ အချစ်အ​ကြောင်းကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း အဖြူစင်ဆုံး ​ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ​နောက် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလမှာ SEVENTEEN အဖွဲ့ဝင် Joshua နဲ့ DK တို့ သီဆိုထားတဲ့ ကိုရီးယားအပိုဒ်​တွေ​ကို ထပ်ထည့်ထားတဲ့ version ကို ထပ်မံထုတ်​ဝေခဲ့ပါတယ်။
Next အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင် အဝတ်အစားဝတ်တာ ရိုင်းလွန်းတယ်ဆိုပြီး ITZY အဖွဲ့ဝင် Yuna ကို ဝေဖန်နေကြတဲ့ K netizen များ »
Previous « BL Adaptation ကားတွေမှာ ပရိတ်သတ်တွေမြင်တွေ့လိုတဲ့ မင်းသားချော (၅) ဦး